Su'aalaha La Weydiiyo - Warshadda Farshaxanka ee Hebei
waxaan leenahay warshad noo gaar ah. Haddii aad fursad u hesho, waa lagugu soo dhaweynayaa inaad soo booqato warshaddeena.
Ma bixisaa adeegyo habeysan?
Waxaan bixinaa adeegyo habeysan Fadlan nala soo xiriir oo aan ka wada hadalno wax soo saarka aad u baahan tahay.Waxaan ku siin doonnaa talobixin xirfad leh.
Muddo intee le'eg ayaan alaabtayda heli karaa ka dib markaan amro?
Waxay qaadaneysaa waqti dheeri ah si aad uhesho sheyga.Hadii aad ubaahantahay inaad sameysid dhoobo dhoobo ah.Waxay qaadataa qiyaastii 20-25 maalmood inaad sameyso moodeelka.Waxay qaadataa 25-30 maalmood in la soo saaro marmar ama alaabada naxaasta ah
Ma arki karaa habka wax soo saarka?
Dabcan, Waxaan kuu soo diri doonnaa sawirada horumarka wax soo saarka usbuuc walba si aad u hubiso ka dib marka wax soo saarku dhamaado, waxaan u soo qaadi doonaa sawirada alaabada iyo fiidiyowyada si aad u xaqiijiso ugu dambeysa. Haddii aysan jirin wax dhibaato ah, waan xirxiraynaa.
Gaadiidkaagu ma nabad qabaa?
Waxaan haynaa xirxirayaal xirfadlayaal ah.Marka xirmada la dhammeeyo, kormeeraha tayada ayaa hubin doona tayada xirmada.Hubso in alaabada ay kuxiran yihiin habka ugu aaminka badan kahor keenista.
Maxaan sameeyaa haddii aan ogaado in alaabtu jaban yihiin markaan helo ka dib?
Marka loo eego heerka burburka alaabada, iibiyahayagu wuu kula xaajoon doonaa. Magdhaw xoogaa lacag ah ama samee alaabo cusub.
Sidee loo rakibaa farshaxan?
Ka dib marka alaabtu dhammaato, waxaan ku dhejin doonnaa warshadda hal mar.Waxaan kuu sawiri karaa sawirrada nidaamka. Ama u samee sawirro rakibid ah. Haddii alaabtu aad u adagtahay.Waxaan sidoo kale aadi karnaa waddankaaga si aan u hagno rakibidda.
Sidee loo bilaaba iskaashiga?
Waxaan marka hore xaqiijin doonnaa naqshadeynta, cabbirka iyo qalabka, ka dibna kala saari doonnaa qiimaha, ka dib qandaraaska, ka dibna bixin doonnaa deebaajiga.